Events - ISEC Eye Centre Myanmar
How to go … ?
dfdd fer qfdsfawqe ds fkadsfk a' dfdd fer qfdsfawqe ds fkadsfk a'
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မျက်စိ ကွန်ဖရန့်ကြီးတွင် တတပ်တအားပါဝင် လျှက်ရှိ
ISEC မျက်စိဆေးရုံကြီးမှ နိုင်ငံတကာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မျက်စိ ကွန်ဖရန့်ကြီးတွင် တတပ်တအားပါဝင် လျှက်ရှိသည့် ဓာတ်ပုံများအားဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ Dr Wong JS speaking at the Myanmar Ophthalmological Conference;
The 1st International Eye Hospital in Myanmar Grand Launching Ceremony
၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံတကာ ISEC မျက်စိဆေးရုံကြီးဖွင့်လှစ် _______________________ ISEC ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရှိ Melia Hotel
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှမျက်စိဆရာဝန်ကြီးနှင့်အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ရန်စောင့်စားနေသူများ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ ☎️☎️Tel:+95 1 386 800,+959448282821-2 29.10.2019 to 9.11.2019 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ?A5, မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ စိန့်ဂျွန်း Shopping Mall အနီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ ?Contact
10 October 2019# WorldSightDay#ကမ္ဘာ့မျက်မမြင်ပပျောက်ရေးနေ့# "အမြင်အာရုံကောင်းစေဖို့ ဦးစားပေးကာဆောင်ရွက်စို့" “VISION FIRST” Most blindness and vision impairment is preventable or treatable if it is
Online Booking ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ စနစ်မိတ်ဆက်
International Specialist Eye Centre မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့မျက်စိ ရောဂါဝေဒနာများ အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းဖို့အတွက် သန့်ရှင်းသပ်ရပ် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများစွာ ရှိနေတဲ့ ISEC Eye Centre မှာ ?လာရောက်စမ်းသပ်ပြသလိုတဲ့ရောဂါဝေဒနာ ?ပြသလိုတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နဲ့
ISEC မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီး၏ ၂၀၁၉ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများစာရင်း
ISEC မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီး၏ ၂၀၁၉ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများစာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်....။ Call Now 09448282821 ---------------------------------------- ✅ Prof. U Tin Win ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးတင်ဝင်း M.B.,B.S, M.Med.Sc (Ophth),Dr.Med.Sc (Ophth), Dip.Med.Ed ,Corneal
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ အတွင်းတိမ် နှင့် အထွေထွေ ရောဂါဆိုင်ရာ မိုးဦးရာသီအထူး Package
? ? ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ အတွင်းတိမ် နှင့် အထွေထွေ ရောဂါဆိုင်ရာ မိုးဦးရာသီအထူး Promotion Packageစတင်လိုက်ပါပြီ ? ? ISEC မွာ ? ပြည်တွင်းပြည်ပ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ တိကျသေချာသော အချိန်ပေး စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုများ
ရေတိမ်ရောဂါဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကုသလိုသူတို့အတွက် ဇွန်လ မိုးဦးရာသီ အထူး Package
✅ရေတိမ်ရောဂါဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကုသလိုသူတို့အတွက် ဇွန်လ မိုးဦးရာသီ အထူး Promotion Package ရယူဖို့ ISEC ကို ယခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ ✅ စကာင်္ပူနိုင်ငံ မလေးရှားနိုင်ငံ များ တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှုရရှိထားသော ISECမျက်စိဆေးရုံကြီး မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိဖွင့်လှစ်လာပါပြီ။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်ကုသ
ဆီးချို နှင့် အမြင်လွှာရောဂါဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကုသလိုသူတို့အတွက် ဇွန်လ မိုးဦးရာသီ အထူး Package
?ဆီးချို နှင့် အမြင်လွှာရောဂါဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကုသလိုသူတို့အတွက် ဇွန်လ မိုးဦးရာသီ အထူး Promotion Package ရယူဖို့ ISEC ကို နောက်မကျအောင် ယခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ ? ?စကာင်္ပူနိုင်ငံ မလေးရှားနိုင်ငံ များ တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှုရရှိထားသော ISECမျက်စိဆေးရုံကြီး